mercredi, 25 décembre 2019 15:36
Primatiora: Mankalaza ny Noely 2019
Notanterahina ny 24 desambra ny lanonana nanamarihana ny Noely 2019 teo anivon’ny Primatiora, izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Fotoana izay niarahan’ny mpiasa rehetra niombom-po sy nifampirary soa, eo am-piandrasana ny figadonan’ny taona vaovao. Fotoana iray ihany koa izay mifanojo amin’ny fifaranan’ny taom-piasàna 2019 ka nanararaotan’ny Praiminisitra nanao jery todika momba ny asa vita tamin’ny fitantanana ny raharaham-panjakàna sy ny fampiharana ny fanavaozana rehetra napetraka.
mercredi, 25 décembre 2019 15:09
Filoha Andry Rajoelina mivady: Nizara fanomezana sy kilalao ho an'ireo zaza tsaboina ao amin’ny HJRA sy HOMI
Nomarihin’ny Filoha Andry Rajoelina mivady tamin’ny alalan’ny fifampizarana sy ny fifankatiavana ny andron’ny 24 desambra 2019.
Tonga teny amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha sy Hopitaly Miaramila Soavinandriana izy ireo nizara fanomezana sy kilalao ho an'ireo zaza rehetra tsaboina, ary nanolotra vatsy sy nitondra ny teny fankaherezana ho an’ny ray aman-drenin’ireo zaza marary amin’izao andro fety izao ihany koa, satria mendrika ny hanao fety anaty hafaliana sy fifankatiavana toa ny rehetra izy ireo.
mercredi, 25 décembre 2019 15:01
Morondava: Olona iray niditra hopitaly vokatry ny fihinanana « gâteau »
Nilamina tamin’ny ankapobeny ny fitsenana ny Noely teto an-drenivohitry ny faritra Menabe. Olona iray no niditra hopitaly noho ny fihinanana « gâteau », ary vehivavy iray tera-dahy halina tao amin’ny CHRR Namahora-Morondava.
mercredi, 25 décembre 2019 14:52
Antalaha: Krismasy anaty rano
Ao anaty oran’andro sy rano miakatra no ankalazan’ny mponina Antalaha ny krismasy 2019. Nitondra orana taty Antalaha iny andro ratsy avy ao amin’ny ranomasina indianina iny.
mercredi, 25 décembre 2019 14:48
Maroantsetra: Dibo-drano ny tanàna maro, tapaka ny herinaratra
Tao anaty orambe no nitsenan’i Maroantsetra ny Krismasy 2019. Maro ny tanàna dibo-drano vokatry ny andro ratsy, ary namono raim-pianakaviana iray tao Andrangazaha Kaominina Ankofabe.
Tapaka nanomboka ny talata 24 desambra tamin'ny 8ora alina ny famatsiana herinaratra fa nidiran'ny rano ny fitaovana fototry ny famokarana herinaratra an'ny Tozzi Green any Ambodiriana, mamatsy ny Jirama Maroantsetra. Mbola mety haharitra ny fanamboarana, hoy ny tompon'andraikitr'ity orinasa ity.
Tapaka manaraka an’izay koa ny tambazotra fifandraisan-davitra Telma, izay mandrakotra ny ankamaroan'ny Kaominina aty Maroantsetra.